Abamahhashi Abane - Idokhumenti (2012) - AFRIKHEPRI FONDATION
Abamahhashi Bane Abane - Idokhumenti (i-2012)
Yifilimu ezimele eveza ukusebenza kohlelo lomnotho olwengamele iplanethi njengamanje. Ukukhula okungenamkhawulo nokuphishekela inzuzo kuye kwashukumisela ubuntu emaphethelweni emvula. Abagibeli bamahhashi banamuhla banodlame, izikweletu, ukungalingani kanye nobuphofu. Uma ubuhlakani babo be-gallop bungamiswa, bangahlehlisa ukuqina kwezizukulwane ezizayo. Umnotho wembulunga yonke mubi. Njengoba le nkinga isiphenduka inhlekelele ngokushesha, abantu abaningi ngokwengeziwe bafuna izeluleko ezizwakalayo zokuyihlela kabusha umnotho wasentshonalanga. Lezi zazi zokugcina ze-3 23 sezivumile ukuchitha ukuthula futhi zichaza ukuthi umhlaba usebenza kanjani ngempela. Lo mbhalo awukho lapho kugxekwa khona umhlaba wezezimali nowezepolitiki noma embonweni wesakhiwo. Ifilimu limane lihlaziye uhlelo lomnotho esikhethe ukuhlala kulo futhi lenze neziphakamiso zoshintsho.
Usuke usabela "Abamahhashi abane - Idokhumenti (i-2012)" Imizuzwana embalwa edlule